Fitantanana ny fampiasana fialam-boly | Reef Resilience
Ny fiverimberenana eo amin'ny tora-pasika dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny tontolo manodidina ny rano. Ny famantarana ny fahafaha-mitondra ny faritra iray dia ampahany manan-danja amin'ny paikady hampihenana ny fiantraikany amin'ny fialamboly. Sary © Wolcott Henry 2005 / Marine Photobank
Ny fialam-boly dia fampiasana zava-dehibe amin'ny faritra maro misy vatohara. Ny fampiasana fialamboly dia mety hanangona (fanjonoana) na tsy hanangona (manondraka, snorkeling, sambo, ary fanjonoana). Ny fampiasana toy izany dia samy loharanom-panerena amin'ny haran-dranomasina ary koa loharanom-bola lehibe. Ny mpampiasa mpampifandray sy ny mpizahantany fizahan-tany ara-barotra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana sy ny fitantanana ny harena, ary matetika izy ireo dia mpiara-miasa akaiky amin'ny masoivohon'ny fitantanana ny harena amin'ny ezaka hiarovana ny haran-dranomasina.
Hery amin'ny fialam-boly Anisan'izany ny fanimbana lozam-piaramanidina sy ny lakandrano ary ny fanjonoana, ny fiaramanidina sambo ho an'ny biby mampinono sy ny sokatra, ary ny fiovaovan'ny biby amin'ny fiompiana sakafo na fisakafoanana, ny fanimbana ny vatohara rehefa mikitroka sy manondraka, manala rano, ary ny fampidirana karazan-javamaniry.
Ireo tranga ireo dia mora mora amin'ny miresaka momba ny fitantanana eo an-toerana. Amin'ny alàlan'ny fomba fijery voalanjalanja mifantoka amin'ny fampiasana maharitra, dia azo ampiasaina ny fampiasana fialam-boly mba hampihenana ny fiantraikany amin'ny haran-dranomasina amin'ny fanamafisana ny fandraisan'anjaran'ireo mpampiasa fialantsasatra amin'ny fitantanana ny haratony sy ny toekarena. Ny fomba tsara indrindra hahaizan'ny fialam-boly dia ny fametrahana fetra, ny fitantanana ny haran-dranomasina ary ny famporisihana ny fanao tsara indrindra.
Mitondra fahaiza-manao - Fomba iray hisorohana ny fiantraikany tsy azo ekena amin'ny fampiasan'ny olombelona ny fametrahana fetra amin'ireo mpampiasa sy karazan'asa izay mifototra amin'ny fahafaha-maoderin'ny ecosystem hiatrehana ny fiantraikany andrasana. Amin'ny fampiharana, mety ho sarotra ny mamaritra ny fahafaha-mitondra eo amin'ny tontolo iainana, fa ny fetra dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny fahalalana faran'izay tsara sy ny fomba fitrandrahana ny mpiserasera. Ny lohahevitra ara-sosialy toy ny ady, ny fifanoherana, ny tabataba ary ireo singa hafa mitarika ny fahafaham-pon'ny mpampiasa (ny fahafaha-mitondra eo amin'ny fiaraha-monina) dia hevi-dehibe ho an'ny mpampiasa mpampifandray sy ny mpizahantany fizahan-tany ara-barotra. Matetika izy ireo no lasa mpamorona lehibe amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fitaterana ny toerana fizahan-tany malaza.
Limotry ny fiovana azo ekena - Na dia mety ho fomba mahomby hampihenana ny fiantraikan'ny fialamboly aza ny tontolo iainana, dia tokony hitandrina ireo manampahefana amin'ny fampiharana azy io amin'ny fomba henjana ihany koa ny isan'ny mpampiasa izay maharitra ho an'ny toerana iray manokana dia miankina tanteraka amin'ny fitondran-tenan'ireo mpampiasa. Noho izany antony izany, ny foto-kevitry ny 'fetra amin'ny fanovana azo ekena' (LAC) dia mety ho loharano mahasoa ho an'ny fitantanana fampiasana. Ny LAC dia mety ho fomba mahery vaika ahazoana mpampiasa (indrindra fa ny mpizahantany fizahan-tany) mba hampiharana ny fomba amam-panao tsara indrindra, satria miankina amin'ny halehiben'ny 'fiheverana ara-tontolo iainana' ny isan'ny mpampiasa. Ny fepetra manan-danja amin'ny drafitry ny LAC dia rafitra iray hanaraha-maso ny fepetra momba ny haran-dranomasina ho toy ny ampahany amin'ny rafitra fitantanam-pitanana manana setriny sy hetsika.
Ny fitsangatsanganana tohodrano dia tetik'ady fitantanana iray hiatrehana ny fiantraikan'ny fialamboly. Sary © James Oliver
Raha vao tafapetraka ny habetsaky ny fampiasana izay maharitra ao amin'ny tranokala, dia mila manamboatra rafitra ho an'ny fitantanana ireo hetsika ireo mpitantana. Raha toa ny fampiasana fialamboly amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy / na ny rafitra fahazoan-dàlana, dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny famolavolana ny fizakan-tena, ny fizahantany, ary ny fanaraha-maso. Ny fampiasana tsy ara-barotra matetika dia tsy mitaky fahazoan-dalana, noho izany dia mety tsy dia ilaina loatra ny fomba fanaraha-maso mba hampihenana ny fiantraikany toy ny fiarovana, ny fifamoivoizana ary ny fifamoivoizana. Ny fananganana toeram-piantsonana sy fanentanana fanabeazana mifandraika amin'izany dia afaka mampihena ny habetsaky ny vatofantsika, raha toa ny fampihenana ny fotodrafitrasa hita any amin'ny morontsiraka (toy ny sombin-tseranana voafetra na fiara amin'ny fiara fitaterana an-tsambo) dia afaka manampy amin'ny fanaraha-maso ny habetsahan'ny fifamoivoizana amin'ny sambo manodidina ny harambato. Ny rafitra fandoavam-bola ampiasain'ny mpampiasa, toy ny fandehan'ny andro, dia azo ampiasaina hanakanana ny isan'ireo mpitsidika any amin'ny tranokala na hanaparitaka ny fampiasana any amin'ny faritra midadasika ary hampihenana ny tsindry amin'ny toerana malaza indrindra.
Misy fomba maro hafa koa azo ampiasaina mba hampihenana ny fampiasana vohikala amin'ny tranokala vitsy kokoa, toy ny fametrahana toeram-ponenana na fanangonana toetr'andro (ohatra, vatoharan-javamaniry na sokajy sokajy ambany, toy ireo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGrenady ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMeksika).
Ny fiantraikan'ny fihetsiketsehana fialamboly dia mety ho simba ihany koa amin'ny alalan'ny fitondran-tena mahasalama. Misy loharanom-baovao maromaro momba ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny fizahan-tany izay manampy amin'ny fampidinana ny fitondrantena izay mampihena ny risika amin'ny vatohara. Anisan'izany ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarakarana trondro azo antoka nohavaozina ho an'ny Great Barrier Reef sy fitarihana nomen'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Alliance. Na dia ho an'ireo fialam-boly mahasalama toy ny fanjonoana aza dia mety hampihena ny fiantraikany amin'ny fametrahana sy ny fampiharana ny kitapo sy ny fatran-tseranana, ary amin'ny famporisihana ny fananganana ny fanjonoana tsara indrindra.
Ireo mpitantsoratry ny vatohara dia mety ho loharanom-baovao manan-danja momba ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny mpampiasa azy. Ny fametrahana fitsipika tsara sy ny fitarihana amin'ny fandaharam-pampianarana sy fanabeazana dia mety fomba tsotra hampihenana ny tsindry amin'ny tranokala malaza. Ny fampiharana ny fomba fanao tsara indrindra dia azo amporisihana amin'ny alàlan'ny rafi-panekena ara-dalàna toy ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoeco-certification programs ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoeco-rating schemes.
Fitsipika fisakanana tsara indrindra avy amin'ny Great Barrier Reef
Manao fanatanjahan-tena amim-pifaliana amin'ny fotoana rehetra rehefa manjono.
Ilaina fotsiny izay ilainao - tsy voatery ho trondro amin'ny fetran'ny kitapo.
Aza mampiasa trondro na trondro tsy misy teratany ho an'ny baolina. Aza avela hiditra ao anaty rano intsony ny karazana voafantina.
Aza manonofinofy ny fikarakarana trondro, toy ny ampahany amin'ny fandaharan'asa fizahan-tany.
Aza manjono akaikin'ny tranokala fanjonoana na pontoon.
Aza trondro amin'ny tranokala fitrandrahana trondro fantatra na ahiahiana.
Ny trondro fialokalofana azo antoka amin'ny biby an-dranomasina (toy ny dolphins, trozona, sokatra, ary dugongs) ary faritra misy fialamboly na fanatodizan'ny vorona.
Raha tsy azonao antoka ny trondro na ny habeny, azafady avy hatrany ny trondro.
Avereno vetivety ny trondro manjavona sy tsy maniry rehetra mba hampihenana ny ratra.
Raha mitazona ilay trondro ianao, esory avy hatrany amin'ny haingon-tserasera na ny atodiny izy ary hamono azy.
Aza manafina - manadio ny fitaovana fanjonoana rehetra (toy ny kitapo sy ny tsipika nesorina ary ny kitapo entana) ary ento miverina any amoron-dranomasina mba handraisana azy tsara.
Aorian'ny fisotroana trondro, aza misoroka ny sombin-tsavony amin'ny sambo sy ny faritra malaza.
Mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny trondro sy ny fandaharanasa fikarohana izay misy.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fitantanana ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana amin'ny sehatry ny fialamboliny an-dranomasina: Lisitry ny toeram-pitsaboanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy tetikasam-pokonolona ho an'ny hetsika eo an-toerana Hawaii amin'ny fandefasana ny fiantraikan'ny fialambolinymanokatra fisie PDF